प्रदेश–१ का किसानलाई १४ करोड अनुदान | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार प्रदेश–१ का किसानलाई १४ करोड अनुदान
on: १ चैत्र २०७५, शुक्रबार ०८:२२ प्रदेश समाचार
साफ च्याम्पियनसिप : उपाधि जिते जनही २ लाख, उपविजेता बने १ लाख, इतिहास रच्ने अवसर -
विराटनगर महानगरपालिका : सडक निर्माणमा ढिलाइले बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त -
१६ करोड लागतमा खुल्यो तरकारी तथा फलफूल बजार -
विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ मा पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्दै दूध र मासुमा आत्मनिर्भरता बढाउन प्रदेश सरकारले किसानलाई १४ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । यो अनुदान स्थानीय तह र व्यावसायिक फार्ममार्फत उपलब्ध गराउन लागिएको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय विराटनगरका प्रमुख डा. लेखराज दाहालले बताए ।
गाईपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मिल्किङ मेशिन खरीदमा रू. ५० लाख अनुदानको योजना ल्याएको छ । यो अनुदान प्रदेशभित्रका २० ओटा गाईपालक सहकारी वा निजी फार्मलाई दिइनेछ । अनुदान प्राप्त गर्ने कुनै पनि संस्थाले अनुदानको २५ प्रतिशत रकम थप गरी मेशिन खरीद गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, १ हजार लिटरको चिलिङ भ्याट जेनेटर खरीदमा पनि उक्त मन्त्रालयले अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यसका लागि २० ओटा कृषक समूह वा सहकारीका लागि रू. १ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । २ हजार लिटरको चिलिङ भ्याट जेनेटर खरीदमा पनि रू. १ करोड अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको छ ।
अनुदानका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव मागिसकेको र लक्षित समूहबाट आएका प्रस्तावमाथि स्थलगत अनुगमन समेत भइसकेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले प्रदेशभित्र विभिन्न पाँच स्थानमा खसीबोका संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ । यसका लागि २ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशभित्र १० स्थानमा वधशाला निर्माण गर्न मन्त्रालयले ५ करोड विनियोजन गरेको छ । पशु बजार निर्माण र सुधारका लागि पनि मन्त्रालयले २ करोड रकम छुट्याएको छ । चैतको दोस्रो सातासम्ममा अनुदानको रकम कृषकको हातमा पु¥याउने गरी काम भइरहेको दाहालले बताए ।
११ चैत्र २०७५, सोमबार ०८:२९
९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार ०५:५७
२८ माघ २०७५, सोमबार १८:१६